सप्तरी–१ मा तीनजना एउटै गाउँका उम्मेदवार, त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा
विशेष सप्तरी–१ मा तीनजना एउटै गाउँका उम्मेदवार, त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा
Ujyaalo बिहिवार, मंसिर १४, २०७४ १७:२६:००
शुभनारायण यादव/उज्यालो ।
सप्तरी, मंसिर १४ – सप्तरी क्षेत्र नम्बर १ मा त्रिपक्षिय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । वाम गठबन्धन, लोकतान्त्रिक गठबन्धन र मधेस गठबन्धनबिच त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको हो ।
वाम गठबन्धनबाट माओवादीका अशोक मण्डल (अमर), लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका रामदेव साह र मधेस गठबन्धनबाट फोरम नेपालका डा. सूर्यनारायण यादव चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । यी तीनैजना तिरहुत गाउँपालिका–४ डिमनका बासिन्दा हुनुहुन्छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा तीनैजना अहिले तीव्रताका साथ मतदाता भेटघाटमा व्यस्त छन् । गाउँ–गाउँमा भेला र बैठक राखेर चुनावी अभियानमा लाग्न कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गरिरहेका छन् ।
मण्डल दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा क्षेत्र नम्बर २ मा माओवादीबाट विजयी हुनु भएको थियो । अहिले उहाँ १ नम्बर क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ । वाम गठबन्धनका उम्मेदवार मण्डलले यसपटक एमाले समर्थित मतदाताको मद्दतबाट आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दाबी गर्नुभयो ।
मधेस गठबन्धनका उम्मेदवार डा. यादव राजनीतिमा नयाँ हुनुहुन्छ । २०४५ सालबाट चिकित्सा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उहाँ सरकारी नोकरीबाट गएको वैशाख ५ गते अवकास भएपछि राजनीतिमा आउनु भएको हो । उहाँले सरकारी सेवामा रहँदा सामाजिक काम गर्नु भएको छ भने कुशल बाल रोग विशेषज्ञका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । यसैका आधारमा चुनाव जित्ने उहाँको विश्वास छ ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदबार नेपाली कांगे्रसका रामदेव साहले आफ्नो पार्टीले लोकतन्त्रका लागि अगुवाई गरेको कारणले पनि मतदाताले आफूलाई नै यसपटक विश्वास गर्ने दाबी गर्नुभयो । मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाती सम्पूर्ण तह तप्काका नागरिकको हित तथा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेसको विकल्प नरहेको साह बताउनुहुन्छ ।
यो क्षेत्रमा स्थानीय तहको चुनावमा वाम गठबन्धनको १८ हजार ५ सय २९, लोकतान्त्रिक गठबन्धनको १८ हजार ३ सय ३० र मधेसी गठबन्धनको २० हजार ४ सय ९६ मत प्राप्त गरेका थिए । क्षेत्र नम्बर १ मा ९४ हजार ९ सय २० जना मतदाता छन् ।